Archive du 20180809
Pastera Mailhol “Tsy misy lalàna milaza fa tsy azo fidiana ny Pastera”
Efatra hatramin’ny omaly ireo kandida tonga nanatitra ny taratasy filatsahan-kofidiana ho filoham-pirenena teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana eny Ambohidahy.
Kandida Faniry Ernaivo Nanatitra dosie ny « Gisa mainty »
Kandida fahefatra nanatitra ny dosie maha kandida ho filoham-pirenena azy tetsy amin’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana omaly ny kandida natolotry ny antoko politika ZAnak’i MAdagasikara ( ZAMA) sy ny « Parti travailliste de Madagascar », Faniry Ernaivo.
Berija sy ny SOLUMA Hanangana antoko politika
Tsy hafa akory fa ny fivondronan’ireo mpianatra mpikaroka eto Madagasikara na ny SOLUMA ihany no heritreretina havadika antoko politika izay kasaina hanohana kandida ho filoham-pirenena avy hatrany ato ho ato, raha ny fanazavan’ny filohamboninahitr’ity fivondronana ity, Berija Ravelomanantsoa.
Fanorenana ifotony Samy manana ny famaritany azy
Tsy mazava hatreto ny famaritana tokana iombonan’ireo mpanao politika mpivoy ny fanorenana ifotony.
Praiminisitra Ntsay Christian Simban`ny mpanolotsainy
Manomboka miharihary ny tsy fisian`ny firaisankinan`ny governemanta Ntsay izay tsy manana afa-tsy enim-bolana hiasana sy hanaovana fifidianana. Tato
Kandida ho filoham-pirenena Be no tsy matotra
Hatreto, misy sahady ireo kandida sady tsy ampy vola no tsy ampy olona fa mitsapatsapa fotsiny raha vantanina ny filaza azy.
Fampiasana fahefam-panjakana Ahiana hiboridana ny HVM
Fotodrafitrasan’ny HAT sy ny HVM Potika am-pitoerana tsy misy mampiasa
Reharehan’ny mpitondra ny fananganana fotodrafitrasa, saingy toy ny vola nariam-potsiny ihany ireny indraindray raha jerena amin’ny zava-misy sasany eto amintsika. Potika tanteraka amin’izao fotoana ny hopitaly manara-penitra ao Manakara, izay tamin’ny andron’ny tetezamita. Tsy nisy mpitsabo, tsy nisy fitaovana,…
Ivon’ny faha-70 taonan’ny FIHEZAMA Homarihina amin’ny Festival ny 10 aogositra izao
Feno 70 taona katroka amin’ity 2018 ity ny FIHEZAMA “FItaizana ny HErin’ny ZAtovo Malagasy” izay manana tanjona fitaizana ny tanora Malagasy ara-batana sy ara-panahy ao anatin’ny fampiharana izany ao anatin’ny kolontsaina sy fanatanjahantena.
Amboadia mitafy hodi-janak’ondry !
Mirarakopana hatrany ny teny mamy ataon’ny mpanao politika. Samy milaza ho tia tanindrazana ary mampanantena fampandrosoana sy famirapiratan’ny firenena mihitsy ny ankamaroan’ireo ho kandida ho filoha e !
Fitaterana an-drenivohitra Mitabataba ny Taksibe, tsy re feo ny “Taxi ville”
Nangina tanteraka toy ireny tsy nisy na inona na inona ireny ny eo anivon’ny tontolon’ny fiarakaretsaka na “taxi ville” eto Antananarivo ankehitriny.
Mpiadina CEPE ao Ankazobe Mety tsy hahazo taratasy fiantsoana ny sasany
Miaina ao anaty tebiteby tanteraka ny ankamaroan’ireo ray aman-drenin’ny mpianatra any amin’ny fari-piadidiam-pampianarana Ankazobe amin’izao fotoana.
Hopitalim-panjakana Mila 200 000 Ar farafahakeliny
Mampitaraina fatratra ny olon-drehetra ny fitsaboan-tena eny anivon’ny hopitaly ankehitriny, indrindra raha tojo aretina sy tratry ny loza tampoka.
ZAZA 14 TAONA NAOLAN-DRAIKELINY Tsy namelany raha tsy bevohoka, tany Brickaville no tratra ilay Rangahy
Zazavavy kely iray vao 14 taona monja no naolan’ny raikeliny tao Andraisoro, Boriborintany fahadimy, ka nitondra vohoka efa ho dimy volana.
Fidirana mpiasam-panjakana Zary toerana natokana ho an`ny manan-katao
Tsy afenina intsony fa misy ny kolikoly amin’ny fidirana ao amin’ny ENAM, ENMG, INFA…